यिनै हुन् जस’को “२३” वर्षकै उमेरमा, श्रीमा’न काल बने, सामान्य विवा’दहुदा श्रीमानले गरे ग’र्भ,वती श्रीमतीको घाँ’टी थि’चेेर ह’त्या!!!!!! – Dainik Sangalo
यिनै हुन् जस’को “२३” वर्षकै उमेरमा, श्रीमा’न काल बने, सामान्य विवा’दहुदा श्रीमानले गरे ग’र्भ,वती श्रीमतीको घाँ’टी थि’चेेर ह’त्या!!!!!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २२, २०७८ समय: १७:३८:०४
उनीहरूबीच बिहान वि’वाद भएको रहेछ। त्यसैक्रममा श्रीमानले श्रीमतीको घाँ’टी थि’चेर ह”त्या गरेका हुन्, घ’टनाबारे राम श्रेष्ठ आफैंले प्र’हरीलाई खबर गरेका थिए। उनले प्र’हरीको ह’टला’इन नम्बर १०० मा फोन गरी आफूले श्रीमतीको ह”त्या गरेको जानकारी गराएका थिए। एसएसपी सिंहले भने । ह”त्याको खबरपछि महानगरीय प्र’हरी वृ’त्त गौ’शालाबाट प्र’हरी नायब उपरीक्षकसहितको टो’ली घ’टना’स्थल पुगेको थियो। प्र’हरी पुग्दा राम श्रेष्ठ कोठामै चु’कुल लगाएर बसिरहेका थिए। प्र’हरी पुगेपछि मात्रै उनले कोठाको चु’कुल खोलेका थिए।
Last Updated on: October 8th, 2021 at 5:38 pm